Saturday May 02, 2020 - 12:18:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
9 Sanadood kadib dilka sheikh Osama waxaa sii xoogaystay awoodda jamaacaadka jihaadiga caalamiga ah waxaana sare ukacay dadka ku biiraya jihaadka arrinkaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya u dabaal daggii mareykanka ee dilka Bin Laden.
Jihaadiyiinta ayaa dhul ballaaran ka qabsaday wadamada Soomaaliya, Afghanistan ,Suuriya,Maali ,Yemen Burkina Faaso iyo Kenya sidoo kale waxaa sare ukacay weerarada caalamiga ah ee Jihaadiyiintu ay ku beegsanayaan reer galbeedka iyo xulufadiisa.
Weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee lagu qaaday qaarada Yurub wixii ka dambeeyay dilkii sheikh Osama Bin Laden waxaa kamid ah weeraradii Paris ee sanad gudahood ka dhacay, weeraradii dalka Biljamka, weerarkii Tuunis ee dadka reer galbeedka lagu laayay, weerarkii Weastgate ee lagu laayay dadka Kirishtaanka ah ee ka dhacay wadanka Kenya.
Dalka Afghanistan oo ah meesha uu kasoo bilaawday halganka jihaadiga ah ee caalamka ka socda 70% waxaa gacanta ku dhigay Taliban oo Al Qaacidda ay beyco kula jirto.
Al Shabaab ayaa sanaddii 2019 qaadday weerar aad uballaaran oo ay ku beegsatay saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay dalka Soomaaliya, weerarka Balidoogle ayay xarakadu sheegtay in ay ku dishay in kabadan 120 askari.
Hujuum kale oo askar iyo saraakiil American ah lagu dilay ayay dagaalyahanada Al Shabaab ee ku xiran Ururka Alqaacidda waxay ku qaadeen saldhig melleteri oo kuyaal gobolka Lamu ee dalka Kenya, taliska AFRICOM wuxuu qiray in weerarkaas looga dilay sedax askari oo ay saraakiil kamid ahayeen.
weeraro boqolaal ah oo jamaaca jihaadiga ah oo Alqaacidda ku xiran ay ka fulisay wadamo ay kamid yihiin Maali, Burkiina Faaso,Niger,Nigeria iyo Ivery Coast waxaana weeraradaas lagu beegsaday danaha reergalbeedka iyo ciidamo taabiciin u ah Mareykanka.
Wixii ka dambeeyay dilkii Bin Laden waxaa daafaha caalamka islaamka ku faafay faracyada Jihaadiga Al Qaacidda waxaana dhismay Al Qaacidada qaarad ukaha Hindiya, Alqaacidada Bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Al Qaacidada Saxaraha Afrika, Alqaacidada Shaam iyo kuwa kale.